Qaybta 1: Waa maxay noocyada kala duwan ee taariikhda aan u baahanahay in si joogto ah masixi on iPhone?
Qeybta 2: Sida loo masixi oo dhan taariikh ka iPhone
Qeybta 3: Poll: Waxa aad u daryeeli dheeraad ah?
Waxaa jira waqtiyo badan oo aad dareentid baahida loo qabo in la tirtiro ee taariikhda oo dhan aad iPhone, waxa laga yaabaa in ay sabab u tahay arimo kala duwan si kastaba ha ahaatee waxa ugu muhiimsan iyaga oo dhan waa in la hubiyo in aad rabto in aad u gaarka ah in la dhowro waqti kasta iyo sidoo kale in ma macluumaadka xasaasiga ah Diintiinii helo in gacmo khalad ah qof.
Waxaa jira arimo dhowr ah oo aad u baahan tahay in ay si joogto ah u tirtirto haddii aad rabto in aad si aad u hubiso in aad taariikhda shakhsiga ah iPhone ahaato qarsoodi mar walba oo ay ku qoran yihiin sida hoos ku qoran:
Taariikhda on daalacashada internetka kala duwan
Waxaad doonaysaa lahaa oo dhan oo ka mid ah tirtiray waqti ka waqti si loo hubiyo in qofna runtii og yahay sida aad isticmaaleysay aad iPhone kale ee aad ka badan. Waa hagaag, ka hor inta aanad bilaabin in aad madaxa ka fekerayo sida loo sameeyo kuwaas oo ku feegaaro, ha na waxaa super si fudud aad u, waxaan doonayaa in aan idinla wadaago sida ugu fiican ee tirtiro oo dhan taariikh ka iPhone. Waxaan isticmaali doonaa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo maanta diyaar u ah ujeedada this - Wondershare SafeEraser.
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah software tirtire ugu fiican iPhone laga helo suuqa maanta. Waa mid ka mid ah codsiyada ugu waxtarka badan oo aad isticmaali karto si aad tirtirto dhammaan xogta gaarka ah ee ammaan ah iyo halis hab xor ah 100%. Waxaa la iman liiska arrin cajiib ah muuqaalada ka dhigaya darajo aad u sarreeya oo miisaanka ah ahaanshaha utility aad ugu wayn dhamaan dadka isticmaala qalab macruufka ah, gaar ahaan iPhone.
Halkan waxaa ku qoran liiska la kooban oo ka mid ah waxa ay sameyn karaan.
1 Click Nadiifinta - SafeEraser ka dhigayaa mid aad u fudud in la nadiifiyo junk oo dhan la kaliya oo gargaar ka click ah.
Photo hawadda - Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ku cadaadisaa sawiro aad in aad qabtay isticmaalaya iPhone.
Masixi Data Private - takhalusid dhammaan xogta gaarka kuu ah Weligeed ma fudud, hadda aad ku hubin karnaa in aad iPhone ku jira ma xogta shakhsiga ah ee inta lagu warshadeeyo oo dhan, iibin, iwm
Masixi tirtiray Files - Iyadoo SafeEraser waxa aad ka heli waa technology ay isticmaalaan US Military oo halkan aad noqon kartaa aw xataa raadad yar ee kasta iyo xog kasta oo hore u tirtiray aad iPhone laga tirtirayaa oo sidaas sameeyey irrecoverable.
Masixi All Data - takhalusid dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka oo aan haysan si ay u soo celiyaan si goobaha warshad ama soo afjarno qalabka sidoo kale waa wax SafeEraser kuu oggolaanayaa in aad samayn ku tallaabooyin dhawr ah.
Sida aad arki karto, la qaababka badan, Wondershare SafeEraser shaki la'aan waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo ay si dhakhso ah oo hufan si ay tirtirto taariikhda iPhone oo dhan.
Hadda, aynu eegno sida loo sidoo kale isticmaali.
Talaabada 1: Ka bilow ayadoo laga soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare SafeEraser on your computer, riix halkan si aad u samayn in.
Talaabada 2: Marka aad ku rakiban SafeEraser, waxaa lagu daahfuri oo ka interface ugu weyn ee la doorto ikhtiyaarka ah masixi Private Data.
Talaabada 3: codsiga waa inay haatan bilaabaan aad ka baareyso iPhone ay u gaar ah oo waa in aad aragto shaashadda ah sida hoos oo muujinaya horumarka scan.
Talaabada 4: Marka scan la dhammeeyo, taas oo qaadan waa dhowr daqiiqo, SafeEraser waa in ay muujiyaan dhammaan xogta gaarka kuu ah shaashadda. Waxaad calaamadee karaan kuwa aad rabto tirtirayaa kadibna riix badhanka 'masixi Hadda'.
Talaabada 5: SafeEraser hadda aad keento doonaa si loo xaqiijiyo in aad rabto in dhammaan xogta la tirtiro sida la doortay, si nooca in 'tirtirto' halkaas oo lagu weydiinaya in aad.
Talaabada 6: Marka xogta la tirtiray, waa in aad suuqa kala ah in ay la mid tahay mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey.
Waxaa aad u tagto, iyagoo isticmaalayo tallaabooyinkan kor ku xusan iyo Wondershare SafeEraser hadda waxaad yaqiinsanaysaa xaqiiqada ah in dhammaan xogta gaarka kuu ah waa buuxda ammaan iyo taariikhda wax ka mid ah isticmaalka iPhone aad si buuxda tirtiray.
Time for a poll deg deg ah; ugu taas oo mid ka mid ah xogta taariikh sameeyo welweshaan dheeraad ah oo ku saabsan iPhone oo aad rabto tirtiray?
> Resource > masixi > Sida loo masixi iPhone Taariikhda